शीर्ष १० आईफोन फोटो अनुप्रयोग हुनु पर्छ Martech Zone
शीर्ष १० आईफोन फोटो अनुप्रयोग हुनै पर्छ
शनिबार, नोभेम्बर ०,, २०२० आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
म एक महान फोटोग्राफर होईन र मेरो क्यामेरा चलाउने एक पेशेवर क्यामेरा हो, त्यसैले म मेरो आईफोन र केहि मनपर्दो अनुप्रयोगहरू प्रयोग गरेर केही बेर धोका दिन्छु। मार्केटिंग पक्षबाट, प्रत्यक्ष रूपमा हामीले गरिरहेको काममा तस्विर प्रदान गर्ने, हामीले भ्रमण गर्ने ठाउँहरू, र हामी बाँचिरहेका जीवनहरूले पारदर्शिताको स्तर थप गर्दछ जुन हाम्रा ग्राहकहरू र अनुयायीहरूले आनन्द लिइरहेका छन्।
हाम्रो समुदायको साथ संलग्न हुन, फोटोहरू प्रमुख हुन। म हरेक कम्पनीलाई आफ्नो कर्मचारीहरु लाई साझा गर्न प्रोत्साहित गर्दछु! यहाँ मेरो मनपर्ने आईफोन अनुप्रयोगहरूको ब्रेकडाउन छ।
हो, मलाई थाहा छ क्यामेरा आईओएसको साथ आउँदछ तर पनोरमिक छवि लिन विकल्प अप्ठ्यारो हुन्छ। पनोरमिक फोटो लिन, विकल्पहरू बटन क्लिक गर्नुहोस् जब तपाईंको क्यामेरा खुला छ। यो हालसालै गएको कन्सर्टमा मैले लिएको तस्बिर हो।
कुनै अन्य फोटो अनुप्रयोगले सामाजिक तस्बिर साझेदारी गर्न यत्तिको सरल बनाउँदैन। मलाई मन पर्छ कि म सिधै ट्विटर, फेसबुक र फोरस्क्वायरमा फोटो खिच्न सक्छु सिधै इन्स्टाग्रामबाट सिकार गरी र अन्य अनुप्रयोगहरूको साथ फोटोहरू फेला पार्न। फिल्टरहरू र ब्लरहरू लागू गर्न क्षमतामा निर्मितले तपाईंलाई प्रो जस्तो देखिन सक्छ।
त्यहाँ केहि सुविधाहरू छन् जुन आधारभूत क्यामेराले अनुमति दिदैन जुन रोचक छ, जस्तै टाइमर थप्ने र फोटो लिने। क्यामेरा + सँग केहि अविश्वसनीय उपकरणहरू छन् तपाईंलाई फिल्टर गर्न, फोकस गर्न र तपाईंले लिइरहनु भएको फोटोहरूमा स्पष्टता थप्न, साथ साथै तिनीहरूको सीधा बनाउने क्षमताको लागि। यो एमेच्योरको लागि निर्मित एक प्रो टूलसेट हो!
ग्रिड लेन्सले तपाईलाई फोटोहरूको संग्रह लिन र एकल छविमा सँगै राख्न अनुमति दिन्छ। तपाईं एक लेआउट चयन र अनुकूलन गर्न सक्नुहुनेछ, त्यसपछि स्पटमा क्लिक गरेर प्रत्येक तस्बिर लिनुहोस्, र त्यसपछि बचत, साझेदारी वा समाप्त उत्पाद ईमेल गर्नुहोस्। यसले एक सानो संग्रह साझा र सरल र सजिलो बनाउँदछ!
कलरस्प्लसले तपाईंलाई लिनु भएको फोटोको अंशबाट र color हटाउन अनुमति दिन्छ। अनुप्रयोग अविश्वसनीय प्रयोग गर्न सजिलो छ - केवल फोटो विस्तार गर्नुहोस् र तपाईंको औंला ड्र्याग गर्नुहोस् जहाँ तपाईं रंग हटाउन चाहानुहुन्छ। समाप्त छवि वास्तवमै अचम्मै लाग्न सक्छ - यो मेरो छोरा र उनकी प्रेमिका नाच हो।
के तपाईसँग कहिले यस्तो फोटो छ जुन क्याप्शन माग्दै छ? यो के हो भन्नेको लागि हो ... वास्तवमै शान्त नेभिगेसन व्हील प्रदान गर्दै जुन तपाईंलाई एक मिनेटमा तपाईंको फोटोमा फैन्सी क्याप्शन थप्न अनुमति दिन्छ।
स्न्यापसीडले तपाईंको छविको लागि केहि रोचक फिल्टर र मानक सम्पादन उपकरण प्रदान गर्दछ। सीमित नियन्त्रणहरू प्रभावशाली छन् र उपयोगिता एकदम नवीन छ।
ब्लेन्डरले यो भनेको मात्र गर्दछ ... बहु छविहरू सँगै मिसाउने क्षमतालाई अनुमति दिँदै। यहाँ शिकागोको मिश्रण छ ... शहरमा गाडी हाँक्दै र यसलाई तल हेर्दै।
द्वारा सिफारिस गरिएको नाट फिन, मैले यो पनि महसुस गरिन कि एभिएरीसँग आईओएस अनुप्रयोगहरू थिए। विडम्बना यो हो कि म आईफोन अनुप्रयोगको मजा ले वेब संस्करणको भन्दा धेरै राम्रो गरीरहेको छु! एभिएरीसँग विशेषताहरूको एक टन छ, तर पनि छ स्टिकर जुन तपाईंको छविमा कलआउटहरू (वा मूँछ) थप्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।
आईफोनका लागि फोटोशप एक्सप्रेस
नाटबाट अर्को सिफारिश र एउटा मैले समावेश गरेको हुनुपर्छ ... फोटोशप एक्सप्रेस। प्रोफेशनल एडिटिंग जुन तपाईं फोटोशप एक्सप्रेसको साथ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ माथिको केहि अन्य उपकरणहरूमा उपलब्ध हुन सक्छ, तर प्रयोगको सहजता अद्भुत छ। थोरै थपको लागि फिल्टर, फ्रेम र प्रभावहरू थप्नुहोस् र तपाईं वास्तवमै एक उत्कृष्ट फोटो सम्पादन सूट पाउनुभयो।
के तपाईंसँग कुनै अन्य आईफोन अनुप्रयोगहरू छन् जुन प्रयोग गर्नको लागि उत्कृष्ट छ?
टैग: ब्लेंडरक्यामेरा +कलरस्प्लशग्रिड लेन्सछवितस्बिरहरूiphoneमाथिफोटोतस्वीरस्नप भयो
सामाजिक मिडिया को। 36 नियम
तपाइँको ब्रान्ड अनलाइन कसरी निर्माण गर्ने
नोभेम्बर २०, २००। 17::2012 अपराह्न
एभिएरी यो सबै मेमे निर्माताका बारे हो। र यो धमिलो र पुनःप्राप्ति उपकरणहरू भयो तर यसको बारेमा वास्तविक कुरा यो हो कि यो सिन्डिकेशन भयो। फेसबुक, ट्वीटर, फ्लिकर ... एक पटकमा। लगभग इन्स्टाग्रामको रूपमा राम्रो
अब, ती मध्ये पहिलो मलाई फेसबुक पृष्ठहरू गुगलमा प्लस WINS सिन्डिकेट गर्न दिनुहोस्!
राम्रो! मैले महसुस गरेन कि उनीहरूको मोबाइल अनुप्रयोग छ!
नोभेम्बर,, २०१ at 18::2012 बिहान
हो यो धेरै राम्रो छ सशुल्क अनुप्रयोग, तर मेम निर्माता र पाठ सम्मिलनको लागि यो अमूल्य थियो। साथै फोटोशप एक्सप्रेस र InstaPicFrame जे ठीक थियो। एभिएरीसँग सब भन्दा राम्रो साझेदारी थियो।
डिसेम्बर १, २०१ 29 2012:२:10 अपराह्न
हाम्रो नयाँ आईफोनोग्राफी अनुप्रयोग, Hipsta Hipster Cam मा जाँच गर्नुहोस् http://www.hipster-camera.com हामी सोच्छौं कि हामीसँग फ्लाईमा बनाइएका असीमित मूल फिल्टरहरूसहित विशिष्ट आईफोन फोटोग्राफी अनुप्रयोगमा राम्रो सुन्दर मोड़ छ।
मार्क्स 11, 2013 मा 1: 16 PM
मेरो विचारमा लेखकले 'Zitrr क्यामेरा' समावेश गर्न बिर्सनुभयो। मलाई लाग्छ यसको क्यामेरा + वा इन्स्टाग्राम भन्दा धेरै राम्रो छ ... साथै, यहाँ केहि अनुप्रयोगहरू त्यति राम्रो छैनन्: /
अप्रिल 4, 2013 मा 2: 49 एएम
राम्रो अनुप्रयोगहरू! तर तपाईंले स्वत: रंगमा प्रो पनि जाँच गर्नुपर्नेछ
जनवरी 2, 2014 मा 3: 05 एएम
Instafusion शीर्ष आईप्याड फोटो-एडिटिंग अनुप्रयोगहरू !!! इन्स्टाफ्यूजन भनेको राम्रो फोटो सम्पादन अनुप्रयोगहरू र आईफोनमा फोटोग्राफहरू सम्पादन गर्न अद्भुत अनुप्रयोगहरू हुन् !!!
मेरो मनपर्ने इन्स्टाफ्यूजन अनुप्रयोग हो
अप्रिल 6, 2015 मा 8: 50 PM
के तपाईंले स्वीट पिक्सेल अझै देख्नुभएको छ! साँच्चिकै राम्रो विचार।